Apokalypsy Archives - Page 2 sur 2 - Fiangonana Apokalypsy Maneran-tany
Catégorie : Apokalypsy
2 novembre 2011 adminApokalypsy
« Fa ny fifaliana avy amin’i Jehovah no fiharovana mafy ho antsika », io no anaran’ny hetsika lehibe izay notontosaina tetsy Antsahamanitra ny talata 01 Novambra 2011 lasa teo. Hetsika izay nokarakarain’ny rantsana Oliva Nasionaly,Lire la suite…
24 octobre 2011 adminApokalypsy
Fanolorana ireo fiara vaovao
Niavaka kely ny fotoam-bavaka izay niarahana tamin’ny Fiangonana Apokalypsy tetsy amin’ny foibe Ambohimarina Itaosy. Ankoatry ny fivoriam-bavaka toy ny isan-tsabata, dia nisy ihany koa ny fanolorana ireo fitaovan’ny fiangonana vaovao, izay marihina fa niarahana tamin’nyLire la suite…
10 octobre 2011 adminApokalypsy
Fihaonambe Apokalypsy Antananarivo
Tontosa ny sabata faha 08 ny volana oktobra 2011 lasa teo, tetsy amin’ny fiangonana Apokalypsy Ambohimarina Itaosy, ny fihaonam-be rezionalin’ny Fiangonana Apokalypsy eto Antananarivo. Fotoana izay natokan’ireo vahoakan’Andriamanitra maro be niaraha-nifaly indray niaraka tamin’ny RayLire la suite…
10 mars 2011 adminApokalypsy
Nahafatesan’i Jesosy : alarobia sa zoma ?
Resaka nifanaovan’ny Ray aman-dReny Pasitera Mailhol momban’ny andro nahafatesan’i Jesosy Kristy, ao anatin’izany ny fanazavana amin’ny tapany voalohany ny fanazavan’i Pasitera Norbert momban’ny nahafatesan’ny Jesosy dia ny hoe « maty tamin’ny andro fahaenina (Zoma) nitsangana alahady« ,Lire la suite…